ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ် - Yangon Media Group
ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၁၂
ရန်ကုန်မြို့ တော်စည်ပင်ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ Park Royal Hotel ၌ နှစ်ရက်တာ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီအဆင့်ဆင့် ရွေးကောက်ပွဲကဏ္ဍစုံမှ ပါဝင်ပတ်သက်သူများအကြား ရွေး ကောက်ပွဲလွန်ကာလ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအဖြစ် ဇူလိုင် ၁၁ ရက်နှင့် ၁၂ ရက်တို့တွင် ကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
”ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အခြေအနေတွေကို ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပါ။အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကရတဲ့ အချက် အလက်တွေနဲ့ နောင်ရွေးကောက် ပွဲတွေကို အခုထက် ပိုမိုကောင်းမွန် စွာကျင်းပနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပါ” ဟု စည်ပင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ စည်ပင်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် တာဝန်ရှိသူများ၊ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၊ အနိုင်ရ စည်ပင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာ ရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူများနှင့် ရွေး ကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ရေး ကူညီပေးခဲ့သည့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ တက် ရောက်ကာ ကဏ္ဍအလိုက် ဆွေး နွေးခဲ့ကြသည်။
”ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကြုံတွေ့ နေခဲ့ရတဲ့ အခြေအနေတွေ၊ အားနည်း၊ အားသာချက်တွေကို ဆွေး နွေးခဲ့တာပါ”ဟု တာမွေမြို့နယ် စည်ပင်အဖွဲ့ဝင်(၂ ) ဦးညီညီစိုးက ပြောသည်။
ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူတစ် ဦးက ကျင်းပခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အဆင် ပြေချောမွေ့သည်ဟုဆိုနိုင်ကြောင်း၊ မဲရုံအများစုတွင် မဲရုံတာဝန်ရှိသူများနှင့် မဲပေးရာတွင်လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများရှိနေပြီး မဲပေးခြင်းကို အချိန်မီ စတင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ခြိမ်းခြောက်မှုနှင့် အခြားစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အားနည်းချက် အနည်းငယ်တွေ့ရှိရသည် မှအပ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ တစ်သမတ်တည်းဖြစ်သည်ကို တွေ့ရကြောင်း ပြောသည်။
သို့ရာတွင် ယခုရွေးကောက် ပွဲတွင် မဲဆန္ဒရှင်များ၏ လက်ချောင်းများ၌ မင်တို့ထားခြင်း ရှိ၊ မရှိနှင့် လိုအပ်သော သက်သေခံစာရွက် စာတမ်းများ စစ်ဆေးခြင်း စသော စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင် အာနည်းချက်များ ရှိခဲ့ကြောင်း၊ မဲစာရင်း အားနည်းချက်ရှိပြီး အမည်စာရင်းမပါ၍ မဲရုံများမှ လှည့်ပြန်သွားရသည့် မဲဆန္ဒရှင်များရှိသည်ကို ၎င်းင်းတို့ လေ့လာခဲ့သည့် မဲရုံ ထက်ဝက်ခန့်၌ တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း ၎င်းင်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
”မဲစာရင်းကိစ္စဟာ မဲလာပေးသူ နည်းပါးတဲ့ အခုရွေးကောက်ပွဲမှာ အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ် ပါတယ်”ဟု ၎င်းင်းကဆိုသည်။ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ အားလုံးပါဝင်နိုင်မှုနှင့် တာဝန်ခံမှု မြင့်မားလာရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပ ဒေမူဘောင်များကို ရွေးကောက်ပွဲ တာဝန်ရှိသူများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရေး ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ရွေး ကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြည်သူ့လှုပ်ရှား မှုအဖွဲ့က တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
NCA စာချုပ်ပါ အချက်များကို ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ကြရန် အားလုံးတွင်တာဝန်ရှိဟု RCSS ဆို
အာဇာနည်နေ့ မတိုင်မီ အကြိုရက်များမှစတင်၍ မန္တလေး၌ူနီ သုံးဖက်ပါယာဉ်ဖြင့် အကြိုလှုပ်ရှားမှုများ ဆောင်ရွက်သွားမည်
”ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအနေနဲ့ လွတ်လပ်ပြီး တက်ကြွတဲ့ နိုင်ငံရေးမူဝါဒကို လက်တွေ့ကျကျ ကျင့်သံ?
နိုင်ငံတကာ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး အကယ်ဒမီ (IACA) နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ထူထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်တွင် မြန်မာမှ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေး တင်ပြ
တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်မည့် နေရပ် စွန့်ခွာသူများ ဒုက္ခသည်စခန်းမှ အဆင်မပြေမှုများ ကြားသ??
‘မြန်မာသံနဲ့ပဲ ခံစားတတ်တယ်၊ လွမ်းတတ်တယ်’ အိအိချွန်
ပေါ့ဘာမှာ မည်သည့်အခါကမျှ အသင်းအတွက် ပြဿနာမဟုတ်ဟု ဆိုးလ်ရှား ဆို